iStat Menus 6, inguqulelo entsha yale bar yesaziso kunye nophuculo oluninzi | Ndisuka mac
Inkampani iBjango isandula ukumisela inguqulelo entsha yeziko layo lezaziso zeMac. Iyaziwa kakhulu I-iStat Menus efikelele kuhlobo lwayo 6.0. Ukuba sele ungumsebenzisi uyakuyazi kakuhle, kwaye kwabo bangekagqibi ukuzama izibonelelo zayo, kwi-iStat Menus 6 uyakufumana iziko elipheleleyo eliza kukwazisa ngobume bekhompyuter yakho.
Esi sicelo saqala ukukhutshwa kwiminyaka eli-10 eyadlulayo. Ukusukela ngoko, inkampani ibigqibezela imveliso yayo yeflegi kwaye ngoku ikwinguqulelo 6.0, apho sifumana uphuculo oluninzi. Ukongeza, UBjango wayefuna ukungqinelana nokukhululwa kwenguqulelo yamvanje i-MacOS High Sierra eyayinikezelwa kubasebenzisi kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kuhlobo lwayo lokugqibela. Kodwa masiqhubeke sikuxelele ukuba loluphi uphuculo olunikwa yiStat Menus 6.
Okokuqala, inkampani ye isoftwe yongeze iwijethi yemozulu apho uzakunikwa ulwazi malunga neqondo lobushushu, imozulu kwindawo okuyo kunye noqikelelo lweyure olunokwenzeka. Ngoku, olu phuculo lusebenza phantsi kobhaliso lonyaka, nangona usenza njalo nge-iStat Menus 6 bakunika iinyanga ezi-6 zenkonzo.
nayo, izaziso zingenziwa ngokwezifiso; Oko kukuthi, umsebenzisi uya kuba nakho ukuxelela usetyenziso ukuba luxele xa ubushushu bezixhobo bufikelela kwi "X" degrees centigrade; xa imfuno yememori igqithile kwaye ezinye iinketho ezinikezelwa ngumsebenzisi.
Okokugqibela, iStat Menus 6 ikwabonelela ngokwezifiso iimali kunye nokusetyenziswa kwe hotkeys zokufikelela ngokuthe ngqo- kwaye ngekhibhodi- kwizaziso ezinqwenelekayo. Ukongeza, umsebenzisi uya kuba nakho ukwenza iiwijethi ezincinci kwifomathi yokulumkisa ukulumkisa ngokuhamba ngakunye. I-iStat Menus 6 inexabiso ngeedola ezili-12 (ukuze ihlaziywe); $ 21 iilayisensi ezintsha. Kukho iphakheji yosapho (ukuya kuthi ga kwiikhompyuter ezintlanu) enexabiso kwi $ 5 yokuphucula kunye ne- $ 18 yelayisensi entsha.
Iinkcukacha ezithe vetshe: Bjango
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Ezinye iiNkqubo zeMac » iStat Menus 6, inguqulelo entsha yale bar yesaziso kunye nophuculo oluninzi